Amanqaku kaJafar Sadhik Martech Zone |
Amanqaku ngu UJafar Sadhik
Sonke sivile ngeSalesforce, iHubspot, okanye iMailchimp. Baye bangenisa ngokwenene ixesha lokukhula kwe-SaaS. I-SaaS okanye iSoftware-njengenkonzo, ngokulula, kuxa abasebenzisi besebenzisa isoftware ngokurhuma. Ngeengenelo ezininzi ezifana nokhuseleko, indawo yokugcina encinci, ukuguquguquka, ukufikeleleka phakathi kwabanye, iimodeli ze-SaaS zibonakalise ukuba zineziqhamo ezigqithisileyo kumashishini ukuba akhule, ukuphucula ukwaneliseka kwabathengi kunye namava omthengi. Inkcitho yesoftware iya kukhula kwi-10.5% kwi-2020, uninzi lwazo luya kuqhutywa yi-SaaS.